La "Trifoglietta" ipaki kunye nedama lokuqubha-Cetona
I-villa eyakhiwe nge-60s, ikwimigangatho emibini, iiyunithi zokuhlala ezimbini ezahlukeneyo, ezinokuhlalwa ngokupheleleyo okanye ngokwahlukeneyo. (akukho ichlorine) itheyibhile intenetya, itheyibhile ekhatywayo, izithuba zokupaka, imimandla engaphandle zixhotyiswe ngee tafile armchairs (8 + 3 iibheji)
Iimitha ezimbalwa ukusuka eCetona kufuphi neS.Casciano dei Bagni, Montepulciano, Pienza, Montalcino.
I-villa, eyakhiwe ekupheleni kwee-1960 kwaye isanda kulungiswa ngokupheleleyo, ikwindawo ephakamileyo ukusuka endleleni, ingabonakali, kwaye ijikelezwe yigadi enedama lokuqubha, indawo yokutyela phantsi kwe-pergola, indawo yokupaka enomthunzi kunye ne-olive grove.
Icwangciswe kwimigangatho emibini yokunxibelelana kwaye ingahlala ngokuzimeleyo zombini kumgangatho ophantsi kunye kumgangatho wokuqala kunye nakuwo omabini. Kumgangatho ophantsi igumbi lokuhlala elikhulu kunye negumbi lebhiliyoni kunye neziko, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi lokulala elinendawo yomlilo kunye ne-terrace kunye negumbi lokuhlambela legumbi. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela ezimbini, igumbi lokuhlala elikhulu elinodonga lwekhitshi oluxhotyiswe ngokupheleleyo kunye nethafa elikhulu kakhulu elinetafile, izitulo zomgangatho, ibarbecue kunye nekona yesinki yokuhlamba. Iibhedi ezilithoba zizonke. Ngolwazi oluthe vetshe qhagamshelana ne-tretrecinque seitresettetre trequattrodue, enkosi.
Ubukho babanini buphelele, bukhona kwindawo kwaye buyafumaneka kuyo nayiphi na imfuno okanye unxunguphalo